Isigaba se-Qi Cultivation: Fumana iQi
Kwi -Promised Healing Of Qi , uRoger Jahnke OMD uchaza oko akubiza ngokuthi "izigaba ezilishumi zokulima kwe-qi." Ngoku, umkhuba ngamnye we-qigong uyingqayizivele, kwaye akufanele silindele okanye sizame ukwenza ukuziphatha kwethu kulungelelanise ngokufanelekileyo kwisakhelo esithile esinqunyiwe . Nangona kunjalo, iimephu zeengcamango zolu hlobo zinokuba luncedo, ngoko makhe sisebenzise isakhelo esicetyiswa nguMnu. Jahnke ukuba ahlole ubuncinane imiba eqhelekileyo yomsebenzi we- qigong .
Njengoko uza kubona, izigaba 1-3 zijongene ngokukodwa kwimpilo yenyama kunye nokuphilisa, izigaba 4-6 kunye nokuphila kakuhle kwengqondo, kunye nezigaba 7-10 kunye nokubonakala kwezinto ezinzulu zokomoya.
Isigaba esisodwa - Fumana iQi
Yintoni eyi-qi , kwaye sihamba njani ngokukufumanisa? IsiNgesi esivamile esithi "qi" "amandla okuphila ubomi" kunye neenguqulelo zesiNgesi igama elithi "qigong" lithi "ukulima kwamandla okuphila." Noko ke, ngaphambi kokuba sihlakulele amandla ethu okuphila, okokuqala sifuna ukufumanisa -kusekwa ngokuchanekileyo ngobungqina be-qi ngaphakathi kwenyama yethu yomntu.
Enye indlela yokufumanisa ii-qi nje ukukwazi ukuvakalelwa kwamandla emzimbeni wethu. Amandla ajikelezayo anokuba nomgangatho wokufudumala, okanye ukupholisa. Kungathi uzive ufana nokubetha, okanye umva wokuba ukhuluphele okanye uzele, okanye mhlawumbi uya kuba nomgangatho wamagesi okanye umbane.
Ukuzisa Ukuqwashisa kwiQumrhu
Indlela yokuqala ukuphawula ezi zintlukwano kukuzisa ingqalelo yakho, ukuqonda kwakho, emzimbeni wakho.
Enye into elula yokuququzelela oku kukugubungela iintendelezo zezandla zakho ndawonye ukuze zifudume zifudumele, uze uzihlukanise ngokukhawuleza, kwinqanaba lesisu sakho, kwaye udale ukunyakaza okuncinci- kwimijikelezo, okanye ukwahlukana kwakhona -nokuba ubeka ingqalelo kwimvakalelo yakho iminwe kunye neentende.
Uziva ntoni? Zama usebenze amehlo akho evulekile, kwaye emva koko uvale-uqaphela nje nayiphi na imizwa kwiminwe yakho, entendeni okanye kwiintonga.
Ukuguqula umzimba wethu-Iingcamango
Ininzi yethu inomkhuba wokucinga emzimbeni wethu njengento eyomeleleyo okanye engaphantsi. "Kodwa kwinqanaba le-molecular, umzimba wethu ngowona-manzi-into ebonakalayo yamanzi. Kwaye kwinqanaba le-athomu kunye ne-atomic, umzimba wethu ungumlinganiselo we-99.99%! Igazi ligeleza ngokuqhubekayo kwiimvini zethu kunye nemithambo, njengoko intliziyo yethu iqhuma phambili. Umoya uhamba kwaye uphume emzimbeni wethu, ngendlela eqhubekayo, njengoko siphefumula. Kwaye ukuphefumula kwamaselula, kunye neenkqubo ezahlukeneyo ze-biochemical, zenzeka ngokuqhubekayo.
Ingongoma yinto yokuba imizimba yethu 'njengomeleleyo' ayikho nje ingcamango - ingcamango, ekufuphi ukuhlola okufutshane, ibonisa ukuba iyanyaniswa ngokupheleleyo. Isinyathelo esibalulekileyo endleleni yokufumanisa i-qi ukuvumela ukuhamba kwesi sizathu sobuqili, kwaye sitshintshe enye into ehambelana nokunyaniseka. Inyaniso kukuba imizimba yethu yomzimba ihamba ngokunyuka, ngaphakathi kwemida yabo, kunye nokuqhubeka nokutshintshiselana nehlabathi "langaphandle", ngomoya ophefumulayo, kunye nokutya namanzi esiwuthandayo.
Emva kokuba siqale ukukhulelwa kwemizimba yethu njengento eqhubekayo ishukumo, kuba lula ukuba "uzive i-qi" -kukuqonda ngokucacileyo umgangatho oshukumisayo wemizimba yethu. Emva kokuba unako ukuqonda uvakalelo lweminwe yakho, okanye phakathi kweentende zezandla zakho, unokuqala ukuqaphela iipatheni zamandla ajikelezayo-zithetha ngeendlela ezithile ze- meridians- okanye iindawo apho amandla athambe ukuqokelela, umz iziqinisekiso. Unokuqala ukuqaphela ukuba i-qi inokuvakalelwa ngamasentimitha amaninzi okanye iinyawo eziliqela ngaphandle komzimba wakho-njengokungathi ifomu lakho lomzimba laligcinwe ngaphakathi kwinto efana ne-cocoon yamandla.
Jabulela ukufumanisa kwe qi!
Yintoni uLazaro Ayenayo Emazulwini?
Izibonelelo zokuPhulukiswa kweziThuthi zoMbiwa kwamanzi
Isikhokelo kwiColostrum njenge-Supplement
Yewel Jewel Net
I-Acupressure Ubuncwane: i-Bai Hui-Amakhulu amaTshintsho
I-Acupressure Treasures - iZu San Li - isisu 36
I-Diamond Sutra, iJewel ye-Mahayana Buddhism
Izigqibo zeNtsha zoNyaka
'Intetho yeeNdaba' (2016)
Umgaqo-nkqubo wokuSebenza koTitshala oMzekelo
IPete Weber Bowler IProfayili
Iimpawu zeJapan Magnolia (i-Saucer Magnolia)
I-Red White neBlue Shooter Recipe
Ubhaptizo lwenziwa njani kwi-LDS (Mormon) yeCawa
UMichael Graves, uMyili kunye noMklami weMveliso
7 Amanyathelo okuvula i-Ownership Car Dealership Franchise
UAdolf Hitler ukhethwe nguKhansela waseJamani
Ukusebenzisa i-Oil Tree Tree yokuPhatha i-Fowus ye-Toe Nail
Imbali yeDkt Pepper
IYunivesithi ye-Dayton GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ukwakha i-Leaf Tree Tree kunye ne-Press Press
I-Case for Choice School
Amahlaya eDick Cheney
15 Iimpawu eziMnandi ezithandekayo Ukujika iiNtloko kwi-Pool Eli hlobo
Iincwadi ezi-5 eziPhambili malunga neNkcubeko yeNtlalo